Marta Gracia Pons. Wareysi lala yeeshay qoraaga Socdaalka Dragonfly | Suugaanta Hadda
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 04/09/2021 12:00 | La cusbooneysiiyay 05/09/2021 19:45 | Wareysiyada, Qorayaasha, Novela
Sawir qaadis. Marta Gracia Pons, astaanta Twitter.
Marta Gracia Pons waa qoraa iyo macallin. Wuxuu ka qalin jabiyay Taariikhda Jaamacadda Madaxbannaan ee Barcelona sidoo kale wuxuu haystaa shahaadada mastarka ee Barbaarinta. Wuxuu leeyahay cinwaanno sida Sheekadii na beddeshay, cirbadaha waraaqaha y Urta maalmaha farxadda leh, iyo sheekooyinkiisii ​​ugu dambeeyay waa Socodkii daadka. Tan dhexdeeda wareysi Wuxuu ka hadlayaa iyo mowduucyo kale. Adiga Waan ku faraxsanahay waqti badan iyo naxariis si aad i caawiso.
Marta Gracia Pons —Waraysi
HADDA SUUGAANTA: Riwaayaddaadii ugu dambeysay cinwaan looga dhigay Socodkii daadka. Maxaad nooga sheegeysaa oo xaggee fikraddu ka timid?
MARTA GRACIA PONS: Sheekadan waa a Socdaalkii Barcelona ee laba waayihii, tii horraantii qarnigii labaatanaad iyo tii ka dambaysay dagaalkii. Xidig laba dumar ah aad uga duwan midba midka kale, oo ku nool duruufo taariikheed oo kala duwan, laakiin ay ku midaysan yihiin xiisaha ay u qabaan dahabka.
Fikraddu waxay ka timid xamaasadeyda aan u qabo Modernism iyo Art Nouveau. Waxaan ku naqaannaa Gaudí qaab -dhismeedka, laakiin wax aad u yar ayaa laga yaqaan dahab -tumayaasha waaweyn ee durdurrada farshaxankan. Ka dibna waan ogaaday Lluís Masriera iyo shabbaddiisa qaaliga ah ee magac leh. Waqti cusub oo loogu talagalay dahabka, halkaas oo lagu abuuray cayayaanka summada leh, naymphs iyo khuraafaadka. Waxay sameeyeen shaqooyin farshaxan oo dhab ah.
MGP: Haa, wax badan ayay ii calaamadisay, markii aan qaangaadhay, Dambaska Angelawaxaa qoray Frank McCourt. Sheeko aad u adag oo ku saabsan Ireland 30 -meeyadii iyo 40 -meeyadii.
Sheekadii ugu horreysay ee aan qoray-oo aan is-daabacay-waxay ahayd a riwaayad taariikheed oo la dhigay gobolka Huesca sanadihii Kali -talisnimada Primo de Rivera iyo Jamhuuriyaddii Labaad. Waxay ahayd doofaarkayga guinea oo aan wax ka bartay sida wax loo qoro.
MGP: Ken Follet. Jacaylka aan u qabo buugaagta ayaa isaga ka bilaabatay isaga oo mahada iska leh waxaan bartay qorista sheekooyin taariikhi ah.
MGP: Dabeecadda Emmaby Jane Austen.
MGP: Midna kama war hayo. Kaliya taas waan necbahay uu carqaladayn.
MGP: Meel gaar ah ma lihi: meel kasta oo aan awoodo ayaan wax ku qoraa oo miis iyo laptop ayaa igu filan. Si kastaba ha ahaatee, inta badan waxaan qoro subaxdii. Waxaan ahay qof 100% maalin ah, sidaas darteed ma awoodo inaan wax qoro habeenkii. Waxaan jeclahay inaan goor hore seexdo si aan uga faa'iidaysto subaxda maalinta xigta.
MGP: Waan jeclahay Sheekada Ingiriisiga ee caadiga ah: Jane Austen, Charles Dickens, iyo walaalaha Bronte ayaa ah kuwa aan ugu jeclahay.
MGP: Hadda Ma akhriyo wax sheeko ah, laakiin halkii qormooyin taariikheed, Hagaag, waxaan naftayda u diiwaangelinayaa sheekadayda xigta, oo lagu dhigay dhammaadkii qarnigii XNUMXaad ee Madrid.
KUWII: Sidee u malaynaysaa muuqaalka daabacaaddu? Miyaad u malaynaysaa inay wax iska beddeli doonto ama ma horeba u samaysay iyadoo qaabab cusub oo hal -abuur leh halkaas ka jiraan?
MGP: Dunida daabacadu waxay leedahay a tartame aad u adag: aaladaha maqalka maqalka. Sidaas oo ay tahay, marka loo eego tirakoobyada iyo in kasta oo ay ahayd xadhig la soo maray sannadkii hore, haddana akhristayaashu way koreen, gaar ahaan akhriska dhijitaalka ah. Tani waxay muujineysaa, in kasta oo ay jiraan kuuskuusyo, sheeko wanaagsan mar walba qabata akhristaha ugu daacadsan.
MGP: Shaki la'aan, waan noolaanay daqiiqado naxdin leh labadii sano ee la soo dhaafay ee masiibada. Mararka qaarkood ma suurtowdo in laga baxsado dunida dhabta ah. Laakiin waxaan nahay dad badan kuwa waxaan ku dhiirannay inaan daabacno inta lagu guda jiro sanadkii la soo dhaafay midna wax badan ayuu qaataa farriimaha togan waxaana uga mahadcelinaya akhristayaasha, kuwaas oo bogaggeenna ku maaweeliyay. Noloshu way socotaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Wareysiyada » Marta Gracia Pons. Wareysi lala yeeshay qoraaga Socdaalka Dragonfly